Ny fiaramanidina Belavia miaraka amina motera tsy mahomby dia nahatonga ny fiantsoana vonjy taitra tany Moskoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny fiaramanidina Belavia miaraka amina motera tsy mahomby dia nahatonga ny fiantsoana vonjy taitra tany Moskoa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nidina tany amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo ao Moskoa ny fiaramanidina mpandeha belarosiana miaraka amina motera fandidiana tokana.
Ny fiaramanidina Boeing 737 izay entin'i Belavia dia nandefa famantarana maika hamonjy an'i Russia.
Avy amin'ny Minsk mankany Antalya, Torkia ny fiaramanidina mpandeha Belavia.
Misy mpandeha 197 ary ekipa fito ao amin'ny fiaramanidina Belavia.
Jet fiaramanidina Boeing 737 ampiasain'ny kaompaniam-pitaterana rivotra belarosiana Belavia, izay niainga avy tany Minsk, Belarus ka hatrany Antalya, Torkia, dia nahavita vonjy taitra tampoka Seranam-piaramanidina Moskovo Domodedovo aorian'ny fandefasana mari-pamantarana vonjy maika eo afovoan'ny sidina.
"Tonga soa aman-tsara tao Domodedovo ny sidina Bavia B29215 miainga avy any Minsk mankany Antalya," hoy ny tompon'andraikitra fiaramanidina Rosiana.
Raha ny angom-baovao dia niantsona tao amin'ny seranam-piaramanidina Domodedovo ny fiaramanidina Belavia miaraka amina motera iray miasa fotsiny.
Ny alatsinainy teo, ny fiaramanidina mpandeha Belavia Boeing 737 miainga avy any Minsk mankany Antalya dia nandefa famantarana vonjy maika rehefa nanidina ny Faritra Belgorod any amin'ny Federasiona Rosiana.
Nandalo an'i Okraina ny fiaramanidina, ary rehefa avy nandefa ny mariky ny alahelo dia nidina izy io ary niova lalana ho any Voronezh ary avy eo nankany Moskoa.
Miisa 197 ireo mpandeha ary ekipa fito ao anatiny.
Tsy nisy kosa ny tatitra momba ny fahafatesan'olona na ny naratra taorian'ny fiakaran'ny vonjy taitra.